Wonke umntu uyazi ukuba ukudlala ngothando luhlobo lomdlalo, ngeli thuba esiyithumela kuyo into yeempawu zokukhanga, ngokuya kufuneka aqikelele ngeemvakalelo zethu. I-Flirt ayivumeli iibinzana ezithethwa ebunzini, zihlala zihlala kwindawo yokufihla. Ukuba ucinga ukuba unamahloni kwaye ungafuni ukuvula amakhadi ngokukhawuleza, zama ukusebenzisa esinye isikhali. Umfanekiso wakho unokuthetha ngawe ngaphantsi kweelwimi ezingenanto.
Kufuneka uhlale ungummangaliso kumntu ngokude kunokwenzeka ukuba ukhetha lo mfanekiso. Lo mfanekiso ukuvumela ukuba ugcine umgama ixesha elide njengoko ufuna, de ugqibe ekubeni uthathe isinyathelo esinqumayo-ukuya okanye ukubuyela emuva, njengoko ufuna. Umfanekiselo wakho udibanisa ubumnyama obunesiqingatha obuya kuxelela abantu yonke into ongayithuliyo ngayo.
Ukwenza lo mfanekiso, khetha ukwenza "Icebo leSmokey." Ubumnyama obumnyama obujikeleze amehlo kuza kunceda ukudala isimo esifanelekileyo. Amadoda aqiniseke ukuba anomdla kwindlela ekhangelekileyo yowesifazane. Kungcono ukugqoka i-light lighter elongated, ukufikelela kwamehlo. Ukuqinisekisa ukuba ibanga elide aliphazamisi, unokulifaka kwicala layo. Ungakulibali ukulinganisa ithoni yobuso bakho, gxi ninisa i-cheekbones kwaye wongeze ukukhanya emlonyeni wakho. Into ephambili ayiyikuyithwala ngombala. Iimpawu zeentloko zakho ezimnyama ziza kuhamba ngomlomo kunye nobunzima beempawu zendalo.
Ukuba ucinga ukuba ukhaliphe ngokwaneleyo ukubonakalisa ngokucacileyo iimvakalelo zakho kunye neminqweno, uya kuhanjiswa ngumfanekiso ongafihla intliziyo yakho yangempela. Umfanekiso we-outspoken seductress uza kukuvumela ukuba ukhethe amadoda ngokwakho, uthathe isinyathelo sokuqala okanye ufihle ulindele ukuphendula. Into ebalulekileyo kuphela kukuba uya kuziqinisekisa.
Ukuze udale umfanekiso ololo hlobo, ufuna nje umgca ovulekile. Khetha iingubo ezivulekileyo okanye i-blouse nge-cut cut. Lo mboniso wobuntombi awuyi kushiya abantu abangenanto. Ukuqinisekisa ukuba indawo ye-decollete ayinasiphako, sebenzisa umququzeleli womzimba okanye i-gel ye-shower kunye neengxube ze-particle. Emva koko uphuzisa isikhumba ngekhilimu uze ugxininise isifuba, amahlombe kunye ne-collarbone kunye ne-powder eneengqungquthela eziqhekezayo.
Izindebe nezipikili musa ukotya ukupenda umlomo ogqamile kunye ne-lacquer, kwaye unike iinwele zakho zikhulu. Kulo mfanekiso ngokukodwa uza kuhamba ngee-curls ezikhanyayo.
Miss Miss coquette.
Ukuba awulungele ukulinda, kodwa ngelo xesha ungafuni ukuthatha isinyathelo sokuqala ngokwakho, ngoko uya kufikelela kumfanekiso wecocette ekhangayo nekhohlisa, apho kunzima khona ukudlula nayiphi na indoda. Kufuneka udale umfanekiso wentombazana enokuthokoza, elula, kodwa ethobekileyo, ekhangayo ubuhle bayo bendalo kunye nokuzimela.
Ukuze kubonwe ngothando, kubalulekile ukugxininisa amehlo. Zifanele zikhanyise, zikhanyise kwaye zikhanye. Ukwenza oku, khetha umthunzi womthunzi okwaneleyo kunye neengqungquthela ezikhanyayo. Faka isicelo kwi-eyelidi ephantsi ngaphaya komgca wokukhula kwe-eyelash. Iimboli ezingaphezulu zigxininiswa ngamthunzi omnyama (kodwa awunomnyama). Sebenzisa i-mascara eyandisa i-eyelashes. Ngomlomo, khetha ukhanyiso olukhanyayo, uze ubeke iinwele zakho kwi-curls eqinile. Oku kuya kulungisa umzobo womfanekiso owuzama ngawo.
Ukukhetha ingubo, iinwele kunye neyakhelo ngokuhlwa, kuyimfuneko ukuba ingqalelo nje ngefashoni kuphela, kodwa kunye nenjongo ozibekela yona. Ukuba ufuna ubuhlobo obude, obunzulu, ngoko umfanekiso wesiphambano sesibhinqa asiyi kuba luncedo. Ukuba ufuna ukunqoba umntu ohendayo othanda abesifazana abanamava, ngoko umfanekiso weentombazana ezingakhathazekiyo - i-simpleton izakukhusela ukuba ufikelele kwisiphumo. Khetha i-hairstyle kunye ne-make-up ekuqwalaseleni iimpawu zayo, kuba akuyiyo yonke into ebonakalayo enhle kwikharityhulam yamaphephancwadi. Ungalibali - ukuzaliseka komfanekiso ofuna ukukhetha iimpahla ezifanelekileyo, izicathulo, izixhobo, ukuvumba. Kwaye uza kufuneka uqaphelisise indlela yokuziphatha. Ukuba umoya nymph ngokukhawuleza uqala ukuziphatheka njengesiqhelo sendawo yokucima, yonke into iya kuphazamisa. Into ephambili, yiba nguwe. Ingakumbi umhlaba wakho ongaphakathi uzakufanisa ukubonakala, uphumelele ngakumbi uya kufumana.
Iimveliso ezenza ube mdala: ezi ndlela 5 zifanelekile ukulibala!
I-Horoscope yama-Aries-amadoda ngo-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
Oko kufuneka uyenze ukuze uqhube phambili kwinqanaba lomsebenzi
Blepharitis kwiso lomntwana
Ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza: ukudala i-hairstyle yomtshato ngeenwele ezimfutshane